Nika iNcinci nge-Supertramp - Izinto Zobugcisa
Nika iNcinci nge-Supertramp
Umculi we-Supertramp / umculi we-gutiarist uRoger Hodgson wabhala le ngoma xa wayeselula, kodwa akazange ayirekhode kude kube kamva. Kwaku malunga neminyaka emihlanu phakathi kokubhala kwakhe ingoma kwaye xa wayeyizisa kwiqela. Xa sathetha noHodgson ngo-2012, wachaza wathi: 'Ndicinga ukuba yingoma enkulu. Khange ndiqonde ukuba bendiqala ukuyibhala. Kwandithatha iminyaka emithandathu ngaphambi kokuba ndiyizise kwiqela. Kodwa ndiyibhalile ndicinga malunga no-1970. Ngelo xesha, ii-60s, ii-70s zakuqala, yayilixesha elinomdla kakhulu, elinye lethemba, uxolo oluninzi nothando kunye nephupha le-60s lalisaphila kwaye likhula , ukuba uyathanda. IiBeatles zazicimile ' Yonke into oyidingayo luthando unyaka ngaphambi koko. Ndikholelwa eluthandweni-bekusoloko kukuthanda-kwaye ndaziva ngathi yeyona nto ibalulekileyo ebomini.
Le ngoma ithathe ubomi bayo, kwaye ndicinga ukuba ibaluleke ngakumbi namhlanje kunakuqala xa ndiyibhalayo. Kungenxa yokuba ngenene sifuna ukuxabisa uthando ngendlela enzulu, kwaye kufuneka sikhathalele. Ingoma isitsho ngokusisiseko: bonisa nje ukuba uyakhathala. Uyazi, fikelela kwaye ubonise ukuba uyakhathala. Ke kwikhonsathi ngumboniso ogqibeleleyo osondeleyo, kuba into endizama ukuyenza kumboniso wam ngaphezulu kweeyure ezimbini kukudibanisa abaphulaphuli kwaye simanyane sonke. Ukuze ekugqibeleni, xa wonke umntu emele 'Nika kancinci,' bavulekile kwaye bakulungele ukuvula iintliziyo zabo kwaye bacule phezulu emiphungeni yabo kwaye bemke ngoncumo ebusweni babo. Kwaye le ngoma iyayenza, inamandla amsulwa. Okwangoku ndiqala, abantu baqala ukuncuma. Iyamangalisa.'
UHodgson uthe le ngoma 'ibhalwe ngexesha apho ukubhala iingoma ezilula kwakulula kakhulu kuba andizange ndicinge ngaphezulu kwazo.'
Ingoma yifowuni yokwabelana nothando lwakho nomnye umntu. Utshilo uHodgson: 'Ingoma yona le ingumyalezo omsulwa, olula endicinga ukuba unamandla ngakumbi namhlanje xa umhlaba uneengxaki ezingakumbi kwaye kunzima ngakumbi ngamanye amaxesha ukuba nemfesane kunye nokukhathalela kuba kufuneka sinyamezele. yonke le miqobo yokusinda; ukuba yingoma ekhuthaza abantu ukuba banike kancinci, hayi banike kakhulu, nika nje kancinci kwaye ubone ukuba uziva njani kwaye ubonise ukuba uyakhathala, kwaye ndiyazi ngam, ngalo lonke ixesha ndiyidlala ekhonsathini, kukho into malunga nala ngoma.
Ndijonge ngaphandle kwaye abantu baqala ukuncuma kwangoko kwaye ngamanye amaxesha bayangana kwaye baqala ukucula nam. Ingoma edibanisa kakhulu enomyalezo omnandi, olula endizingcayo ngawo kwaye ndiyakonwabela ukudlala namhlanje. '
Oku kwasetyenziswa kwintengiso zeGap ngexesha leKrisimesi, 2001. Amabala abonisa iimvumi ezahlukeneyo zitolika ingoma ngomyalezo ofanayo: thenga izinto ezininzi. Abanye babazobi abaye bayenza kwiintengiso yayinguRobbie Robertson, uSheryl Crow, uLiz Phair, uDwight Yoakam, kunye noShaggy.
I-Goo Goo Dolls ikhuphe oku kwi-albhamu yabo ka-2004 Hlala kwiBuffalo . Inguqulelo yabo ibe nempumelelo enkulu kwizitishi ezingama-40 eziphezulu nakwizikhululo zamatye akhanyayo- yenza # 37 kwi-Hot 100.
Oku kwamkelwe njengengoma yomxholo ukunceda ukukhulisa imali yezizathu ezininzi ezifanelekileyo. UHodgson ufumana izicelo ezininzi zokuyisebenzisa kwaye ube nesisa ekunikezeleni amalungelo kwimizamo yesisa. Utshilo uRoger, 'Ndonwabile kakhulu ukuyiboleka nakweyiphi na imali efanelekileyo yokufumana imali okanye yokunceda kwintlekele. KwiNkanyamba uKatrina, yayisetyenziswa kakhulu kunye netsunami nayo nakwabanye abaninzi, ke kuyamangalisa ukuba nengoma enokusetyenziswa ngaloo ndlela. Ukonwaba kakhulu. '
UPrincess Diana wayithanda le ngoma, kwaye uHodgson wayenza ngembeko yakhe kwiKonsathi ka-2007 kaDiana eWembley Stadium. U-Hodgson wathi, `` Ndandiba lusizi kuba ndingazange ndiyidlale inkosazana ngelixa yayisaphila kodwa ndandonwabile, iinkosana zandimemela ukuba ndiyodlalela imbeko yayo kwiminyaka eli-10 emva kokufa kwayo ukubhiyozela ubomi bayo. Ibala laseWembley kwaye, eneneni, bendinovalo kwaye bendine-laryngitis eqhubekayo, ke ilungile kwaye nelizwi lam laqhekeka amatyeli ambalwa. Kwakumangalisa-ukujija kodwa kwakumnandi kakhulu xa abaphulaphuli bema ngeenyawo, kunye neenkosana, ukucula 'Nika kancinci' kunye nam. Lowo yayingumzuzu wobugqi. ' (Enkosi kulawulo lukaRoger ngoncedo lwabo nasekuboneleleni ngeekowuti.)
Ngo-2017, 'Nika uNcinci' wasetyenziswa kwifayile ye- Intengiso yeKrisimesi yeAmazon apho iipakeji ziyicula khona.
uphawu lwe-seal ukusuka kwi-rose lyrics
hey ntomb'encinci ngutata wakho ekhaya
ndise kwindawo efihlakeleyo lyrics
Ndingathanda ukutshintsha umhlaba kwiminyaka elishumi emva kwamazwi
ndibeke ijean yam eblue kwizingoma